आफ्ना सिर्जना आजै पठाउनुस् है ! | Ratopati
आफ्ना सिर्जना आजै पठाउनुस् है !
personरातोपाटी exploreकाठमाडौं access_timeमाघ २३, २०७५ chat_bubble_outline0
प्यारा प्यारा भाइ बहिनीहरु,
तपाईंहरुलाई www.ratopati.com मा हार्दिक स्वागत छ ।
रातोपाटी सबैको र सबैभन्दा राम्रो सम्पूर्ण न्युज पोर्टल हो । त्यसैले यो मुलुकका भविष्यका कर्णधार तपाईं भाइ बहिनीहरुको पनि हो ।
यसमा भाइ बहिनीहरुका लागि नै भनेर बालसंसार खण्ड नै छ । यो पेजमा तपाईंहरुले पढ्न पर्ने ज्ञानवर्धक राम्रा राम्रा कुराहरु हुन्छन् । यहाँ तपाईंहरुकै समाचार हुन्छ । कथा, नाटक, निबन्ध हुन्छ । नीति कथा हुन्छ, कविता हुन्छ । असल मान्छेको जीवनी हुन्छ । सामान्य ज्ञान हुन्छ र अनौठा कुराहरुको जानकारी पनि हुन्छ ।
त्यति मात्र पनि होइन, यहाँ प्रतिभाशाली भाइ बहिनीको सिर्जनासमेत छापिन्छ । रातोपाटीलाई थाहा छ, तपाईं पनि प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ । तर, तपाईं के कुरामा प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईंले आफ्नो सिर्जना पठाउनु भएपछि मात्र हामीलाई थाहा हुनेछ ।
तपाईंलाई चित्र बनाउन आउँछ ? कि कथा अथवा कविता लेख्न आउँछ ? कि कतै घुम्न गएको अनुभव लेख्न मन लाग्छ तपाईंलाई ?
तपाईंलाई जेमा रुची छ अथवा जे गर्न आउँछ, त्यो सिर्जना गरेर पठाउनुस्, रातोपाटीमा छापिन्छ ।
सबैभन्दा राम्रो सम्पूर्ण न्युज पोर्टल रातोपाटी सबैको हो, त्यसैले तपाईंको पनि हो । तपाईंको आफ्नै न्युज पोर्टल www.ratopati.comमा आफ्ना सिर्जना आजै पठाउनुस् है !
आफ्ना सिर्जनासँगै तपाईंको नाम, ठेगाना अनि तस्बिर पनि नबिर्सी पठाउनुस् । तपाईंलाई त्यसरी पठाउन आउँदैन भने आफ्ना अभिभावक वा शिक्षकको सहयोग लिनुस् है !
( आफ्ना सन्तान, भाइ बहिनी एवम् विद्यार्थीका सिर्जना पठाउन सघाई दिनुहुन आदरणीय अभिभावक एवम् शिक्षकज्यूहरुमा हार्दिक अनुरोध छ।)
सिर्जना पठाउनको लागिः
लकडाउनमा मेरा सिर्जनाहरु
मेरो सानो खरायो
मोहन वैद्यको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न प्रचण्ड अस्पतालमा